Rehefa mivoaka ny iOS 9: daty famoahana ny iOS vaovao | Vaovao IPhone
ankehitriny Nampiditra ny iOS 9 i Apple. Ity no fanavaozana manaraka ny rafitry ny fiasanao ary topi-maso ny vaovao rehetra azonay jerena amin'ireo fitaovanay mifanentana. Na dia azonao atao aza izany araho ny keynote amin'ny alàlan'ny fononay, mety tsy nahatratra ny fizarana daty famoahana ianao. Noho izany antony izany dia manazava eto ambany izahay rehefa mivoaka ny iOS 9, ary inona ireo daty famoahana izay tsy maintsy ho fantatrao fa ianao no voalohany mankafy ny vaovao momba ny rafitra miasa.
Raha ny marina, iOS 9 dia ho hita manomboka anio "Vaovao mahafinaritra! Mety mieritreritra ianao." Na izany aza, ny fahazoana eo noho eo ihany dia ho an'ny mpamorona, izay afaka miditra amin'ny fitsapana beta izay tena misy ny fanatsarana rehetra izay nolazain'izy ireo taminay tamin'ny hetsika androany, saingy, araka ny noeritreretinao azy, dia mila fanitsiana vitsivitsy. Sy vahaolana amin'ireo olana ary lesoka hita nandritra io dingana io. Ary ahoana ny amin'ny vahoaka? Rahoviana isika no afaka mankafy ny iOS 9? Raha ny tena izy dia tsy misy sisa tavela toa ny toa azy.
La Misokatra ho an'ny besinimaro ny iOS 9 beta, izany hoe, ilay iray izay tsy maintsy hisoratanao anarana hahafahana mitsapa azy tahaka ny nitranga tamin'ny fanavaozana teo aloha, dia ho tonga amin'ny Jolay. Mbola tsy misy daty marina, fa amin'ny volana fahavaratra dia ireo rehetra nisoratra anarana no mety ho voalohany mahita ny vaovao sy ny fanatsarana ny OS an'ny Apple, amin'ny endrika mety misy lesoka sy hadisoana. Izay no ilana ny beta!
Ary ahoana raha tsy te hahalala ianao tsy misy betas ary aleonao miandry ny kinova farany? Avy eo dia mila miandry ianao hoe inona no ho fampisehoana fampisehoana an'ireo terminal finday Apple vaovao, izany hoe ilay iPhone vaovao. Ny hetsika dia atao amin'ny fararano foana, ary ao amin'ny Actualidad iPhone dia efa nilaza taminay ny momba ny fivoahan'ny Vodafone amin'ny daty famoahana ny iPhone 6s
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 9 » Rehefa mivoaka ny iOS 9: daty famoahana ny iOS vaovao
Raul Serrano Alonso dia hoy izy:
Andro inona no hivoahan'ny fanavaozana ???
Valiny tamin'i Raul Serrano Alonso
Edgardo robinson dia hoy izy:
Ary inona no nitranga rehefa hivoaka ny iOS 8.4 na miandry aho miandry bebe kokoa ny jailbreak
Valiny tamin'i Edgardo Robinson
Fernelis Ranger Agramonte Filpo dia hoy izy:
Ny iOS 8.4 dia mivoaka amin'ny faran'ity volana ity, ny iOS 9 dia hivoaka amin'ny fararano manaraka, ny volana septambra ho marimarina kokoa !!!
Valiny tamin'i Fernelis Ranger Agramonte Filpo
Mbola tadidiko fa rehefa nanamboatra zavatra mahomby avy amin'ny ios 7 i apple dia nidina ny zava-drehetra
Ricky bruno dia hoy izy:
Andramo ny tsy hiresaka daty miresaka vanim-potoana amin'ny taona, tokony ho fantatrao fa maro ny olona eto amin'izao tontolo izao no mamaky an'ity vaovao ity ary tsy avy amin'ny firenena / kaontinanta iray isika, ny fahavaratra ho ahy dia amin'ny volana janoary fa tsy amin'ny volana jolay. Mametraha daty miresaka iray volana sy iray andro. MISAOTRA
Valiny tamin'i Ricky Bruno
Amin'ny farany dia miteny zavatra hisoratra anarana ianao mba hananana ny kinova beta teo aloha. Fa aiza no anaovana izany firaketana izany?
Mamaly an'i Cuauhtémoc
Ny fanavaozana farany ny IOS dia namafa ny mozika rehetra, mandra-pahatongako nividy… .. Ny zava-drehetra mahazatra amin'ny iPad, tsy hitako izay hatao, mba ampio aho… ..
Ramón Ardura vigata dia hoy izy:
Anisan'ireo fampiharana be dia be, maninona raha asio hira fa tsy tonony ho an'ny antso ho avy?
Mamaly an'i Ramón Ardura vigata
Very hevitra aho, amin'ity taona ity no mivoaka na amin'ny taona ho avy, satria milanja loatra ny IOS 8.4 ary 8 gb fotsiny ny iphone ary heverina ho maivana kokoa ny IOS 9, ka mila toerana bebe kokoa
Daty marina azafady, avy amin'ny toerana samy hafa isika rehetra ary tsy mifanindry ny fizaran-taona. Misaotra
Ny 16 septambra dia navoaka ho an'ny rehetra ny iOS 9
Louis oct dia hoy izy:
Fanontaniana iray maninona rehefa mamonjy fifandraisana aho ary miantso ahy ny mpifandray dia milaza fa tsy fantatra izany, ka lazao ahy ny fomba hamoronana izany lesoka izany. Amin'ny lafiny iray rehefa efa misy ny fanavaozana ny iOS 9.2 ary ampahafantaro ahy fa mamela ny mailako aho luisoctaviopuc@hotmail.com
Valiny tamin'i Luis Ok
Ny fahatongavan'i iOS 9 amin'ny iPad 2 sy iPhone 4S dia voamarina